Joe Biden: “Waxaan rumeysanahay in aan guuleysan doono” | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Joe Biden: “Waxaan rumeysanahay in aan guuleysan doono”
Joe Biden: “Waxaan rumeysanahay in aan guuleysan doono”
Musharraxa xisbiga dimuqraadiga Joe Biden ayaa muujiyay kalsooni isla markaana ka hadlay muhiimadda ay leedahay mideynta dalka.
“Halkan kama sheegayo in aan guuleysannay balse waxaan halkan ka sheegayaa in marka lasoo gabagabeeyo tirinta codadka, waxaan rumeysanahay in aan guuleysan doono” ayuu yiri Biden.
Inkasta oo ilaa iyo hadda ay socdaan tirinta codadka gobollada sida aadka laisugu hayo balse dimuqraadiga waxay sheegayaan in ay heleen codadkii ugu badnaa abid ee uu ku guuleysto musharrax u tartamayo madaxtinimada Mareykanka.
Arbacadii Dimuqraadiga wuxuu sheegay in uu ku guuleystay codad gaarayo 70.5 malyan halka Trump uu ku guuleystay in ka badan 67.2 malyan cod.
Inkasta oo hadda ay socoto tirinta codadka, weli waxaa laga dhuursugayaa natiijada gobollada muhiimka ah sida Arizona, Georgia, Nevada, Wisconsin iyo Pennsylvania.
Dacwadda ay gudbiyeen kooxda ololaha doorashada Trumpa ayaa waxay ku sheegeen in mid kamid ah kormeerayaashooda uu arkay mid kamid ah shaqaalaha doorashada oo xilli dambe 53 cod ku darayo codadkii horey u gaaray deegaanka Chatham.
Kooxda ololaha Trump waxay gudbiyeen dacwad ah in la joojiyo tirinta codadka gobollada Michigan iyo Pennsylvania , halka ay codsadeen in dib loo tiriyo codadka gobolka Wisconsin, halkaas oo ay sheegeen in wax isdabamarin ay ka dhacday.
Gobolka Georgia, wuxuu kamid yahay meelaha sida weyn laisugu hayo, ku dhawaad codad gaarayo 200,000 ayaanan weli la tirin, sida ay sheegayaan guddiga doorashada.
Trump wuxuu ku horreeyaa 76,737 codadka laga dhiibtay gobolka North Carolina, halkaas oo ay saraakiisha sheegeen in laga yaabo in natiijada la helo 13-ka bishan Nofembar.
Gobolka Wisconsin, waxaa codad gaarayo 20,510 ku hogaaminayaa Biden- halkaas oo boqolkiiba 99 la tiriyay codadkii la dhiibtay.
Gobolka Nevada waxaa la tiriyay codadka boqolkiiba 85%- Biden ayaa ku hogaaminayaa codad gaarayo 7,467.
Halka gobolka Pennsylvania, uu Trump ku horreeyo codad dhan 187,000- balse waxaa weli la tirin boqolaal kun oo codad ah, kuwaas oo u badan deegaanada ay ku xooggan yihiin dimuqraadiga.
Previous articleShirkada Twitter oo ka digtay Ra’iisul Wasaaraha Slovenia oo u “ Hambalyeeyay” Trump, ayada oo aysan meel u dhicin USA
Next articleHay’adda Human Rights Watch oo war ka soo saartay xaaladda ka taagan gobolka Tigreega
Waxaa goordhaw Hotelka Jaziira lagu soo gabo gabeeyay shirkii magaalada Muqdisho maalmahan uga socday qaar badan oo kamid ah musharaxiinta u taagan xilka Madaxweynaha...
Madaxweyne Farmaajo ma iska Hubiyey howsha ka socota Guriga Maama Khadiija...
Anika Chebrolu: Gabadha 14 jirka ah ee xalka muhiimka ah u...
Geriga kali ah ee laga helo dhulka soomaalida Kenya oo qalab...
Dad ku dhintay dagaal ka dhacay tuulada Garbo-Ciise oo dhexmaray Soomaalida...